ဟိုက်ဒရိုဂျင် (အင်္ဂလိပ်: Hydrogen)သည် ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယားတွင် ပထမဆုံး ဒြပ်စင်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကိုဂရိဘာသာစကားအရ hydor --- water and gennao --- birth) (water bearing) အဖြစ် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ဗြိတိသျှလူမျိုး သိပ္ပံပညာရှင် ဟင်နရီကဗင်ဒစ်က ၁၇၇၆ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် အရောင်အဆင်း အနံ့ အရသာ မရှိ သော အငွေ့ ဖြစ်သည်။ ၎င်း အက်တမ်ကို သင်္ကေတအားဖြင့် ( H ) ဖြင့်ဖော်ပြပြီး နျူကလိယ တစ်ခု၊ ပရိုတွန်တစ်လုံးနှင့် အီလက်ထရွန်တစ်လုံးဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့ စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း သည် ရေနှင့် သက်ရှိ ဖြစ်စဉ် အားလုံး တွင် အဓိကပါဝင်ပြီး ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်တွင်သာမက စကြာဝဠာ ထဲတွင်လည်း တွေ့ရှိပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွင် အိုင်ဆိုတုပ် အမျိုးအစားသုံးမျိုး ရှိပါသည်။၎င်းတို့မှာ
Most stable isotopes of ဟိုက်ဒရိုဂျင်
3. tritium,mass3 (သဘာဝထဲတွင် သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သာတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးမျိုးသော အနုမြူဓာတ်ပြုခြင်းများကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်)
ဟိုက်ဒရိုတွင်ပါဝင်သည့် မော်လီကျူးတစ်လုံး၏အလေးချိန်သည် 2,01594 ဂရမ်ရှိပါသည်။အပူချိန် 0ֺC နှင့် လေထုဖိအား 1 atm တွင် ၎င်းဓာတ်ငွေ့၏ သိပ်သည်းဆ တန်ဖိုးသည် 0.071 g/l ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် လောင်ကျွမ်းမှု အားအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် ရေထက် အခြားသော အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များတွင် အနည်းငယ်ပိုပြီး ပျော်ဝင်နိုင်ပါသည်။ ဓာတ်သတ္ထု အများစုသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုစုပ်ယူပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို steel အား စုပ်ယူခြင်းမှ ကျွတ်ဆတ်သော steel ကိုရရှိပါသည်။ ၎င်းကို ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းများတွင်လိုအပ်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။သာမာန်အပူချိန်၌ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် ဓာတ်ပြုလွယ်သော အရာတစ်ခုမဟုတ်ပေ၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုခု၏ အကူအညီ အနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်မားသည့်အခါ၌သော်လည်းကောင်း ဓာတ်ပြုမှု ကောင်းမွန်ပါသည်။ Atomic ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် သာမန်အပူချိန်မှာပင် စွမ်းအားကောင်းသော ဓာတ်လျှော့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ သာမန်အပူချိန် သာမန်အခြေအနေတွင် နှေးကွေးသော်လည်း ဓာတ်ကူပစ္စည်းအကူအညီ ( ဥပမာ … platinum, or an electric spark )တစ်ခုခုဖြင့် ဓာတ်ပြုမှုအရှိန်ကိုမြင့်တင်လျှင် ပြင်းထန်တဲ့ ပေါက်ကွဲမှုမျိုး ( သို့ ) စွမ်းအင် ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အား အမိုနီးယား အမြောက်အများထုတ်လုပ်ရန် အသုံးများပါသည်။ လောင်စာများသန့် စင်သည့်နေရာတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ သစ်သီးသစ်ရွက်ဆီများ အဆီအခဲအဖြစ် ပြောင်းလဲရာတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ် ပေါင်းထည့်ပေးရသည်။ ထို့အပြင် ဒုံးပျံ လောင်စာအဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် လောင်ကျွမ်းခြင်းမှ စွမ်းအင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာ ကလပ်စည်းများသည် စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင်လည်းကောင်း၊ သုတေသန လုပ်ငန်းများတွင လည်းကောင်း အသုံးပြုကြပါသည်။စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ဟိုက်ထရိုဂျင်သည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ( သို့ )ဓာတုအဆိပ်အတောက် တစ်စုံတစ်ခုမှမဖြစ်ပေါ်စေပဲ အသုံးပြုနိုင်သည်။
လောင်ကျွမ်းမှုအားကောင်းသဖြင့် ပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လေနှင့်အတူ လွယ်ကူစွာပျံ့နှံနိုင်သောကြောင့် အသက်ရှူသောအခါ လူကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း ဟိုက်ဒရိုဂျင်မမာဏ များပြားလာသည့်အခါ အောက်ဆီဂျင်လစ်လပ်သည့် နေရာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရှုရှိုက်မိလျှင်လည်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ နားအူခြင်း ၊ မူးဝေခြင်း ၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ သတိမေ့ခြင်း ၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊အော့အန်ခြင်း နှင့် အာရုံ ခံစားမှုစိတ်ကျဆင်းခြင်း စသည့် ရောဂါ များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ရှုရှိုက်မိသူရဲ့ အသားရောင်ဟာ အပြာရောင်သန်းလာတတ်သည်။ လွန်ကဲလာပါက အသက်အန္တရာယ်ကိုပင် ထိခိုက်စေသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင် အဆိပ်အတောက်ရှိကြောင်း သတိပေးချက်မရှိသည့်နေရာများ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပမာဏ တိုင်းတာမှုရှိသည့်နေရာများကို ဝင်ရောက်သင့်ပါသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် ကမ္ဘာမြေလွှာတွင် 0.15% သာရှိပြီး အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ ရေထဲတွင်ဖြစ်ပါသည်။ လေထုထဲတွင်ရှိသော ဟိုက်ဒရိုဂျင် 0.5 ppm မှာ ရေငွေ့ များနှင့် ပေါင်းစပ်ကာတည်ရှိပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် biomass ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် သာမန်အားဖြင့် လေထုထဲတွင်သာ တွေ့ရှိရပါသည်။ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် နှင့် သက်ရှိများအတွက် အောက်ဆီဂျင် လစ်လပ်မှုများ သက်ရောက်စေပါသည်။ သစ်ပင်အများအပေါ်တွင် ဆိုးကျိုးများကိုမတွေ့ရှိရပါ။ ရေအောက်သတ္တဝါများအပေါ် သက်ရောက်ခြင်းမှာ ယခုအချိန်ထိသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ 
Simpson၊ J.A.; Weiner၊ E.S.C. (1989)။ "Hydrogen"။ Oxford English Dictionary။7(2nd ed.)။ Clarendon Press။ ISBN 0-19-861219-2။
Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; Holleman, Arnold Frederick (2001)။ Inorganic chemistry။ Academic Press။ p. 240။ ISBN 0123526515။
"Hydrogen"။ Van Nostrand's Encyclopedia of Chemistry။ Wylie-Interscience။ 2005။ pp. 797–799။ ISBN 0-471-61525-0။
Emsley၊ John (2001)။ Nature's Building Blocks။ Oxford: Oxford University Press။ pp. 183–191။ ISBN 0-19-850341-5။
Stwertka၊ Albert (1996)။ A Guide to the Elements။ Oxford University Press။ pp. 16–21။ ISBN 0-19-508083-1။
MUCTR-MM, ဘာသာပြန်သူ သန့်ဇော်